Uganda oo ciidamo kala baxeyso Somaliya – AfmoNews
Uganda oo ciidamo kala baxeyso Somaliya
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa shaaciyay in dowladiisa ay Somaaliya kala baxeyso CIidamo si gaar ah u tababaran, kuwaas oo ku howlgalla Magaca Amisom
Madaxweyne Musaveni ayaa sheegay in Ciidamadaas ay ka qeyb qaadan doonaan howlaha sugida Amniga doorashooyinka ka dhacaya gudaha dalkaasi Uganda 14-ka Bishaan si looga feejignaado falal amni darr oo dhaca.
Ciidmada ayuu sheegay inay si gaar ah u ilaalin doonaan Amniga Guud ee Caasimadda dalka Uganda ee Kampala, isla markaana inay Soomaaliya Ciidamada kala baxaan ay ku qasabtay sababo la xiriira dhanka Amniga.
“Xubnaha Mucaaradka waxay ku hanjabeen inay gubayaan kaalimaha shidaalka ee Kampala. Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inaysan jirin cid gubaysa Kampala, ”ayuu yiri Museveni.
Cabsida la xiriira dhinaca amniga ee dalka Uganda ayaa timid wixii ka dambeeyay markii uu dhacay dhawaan iska horimaadyo maalmo socday oo u dhaxeeyay taageerayaasha mucaaradka, kadib markii Boolisku xireen Musharax Madaxweyne ahna Muusikiistaha Caanka ah ee lagu Magacaabo Robert Kyagulanyi.
Dowladda Uganda ayaa ah dowladda ugu badan ay Soomaaliya ka joogaan Ciidamada ku howlgalla Magaca Amisom, iyaga oo Ciidamada dowladda ka taageeraya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.